UKhune kumele akusebenzele ukubuyela eqenjini leChiefs: kusho uHunt - Impempe
UKhune kumele akusebenzele ukubuyela eqenjini leChiefs: kusho uHunt
January 24, 2021 January 24, 2021 Impempe.com
Amaphutha aphuthisela iqembu ngamaphuzu kabuhlungu enziwa ngunozinti weKaizer Chiefs, u-Itumeleng Khune kubukeka sengathi asekude ukuxoleleka njengoba engasabonakali nangokhalo eqenjini elisuke liyodlala.
Lo nozinti onamava futhi oseneminyaka engaphezu kweshumi eyisethenjwa kuleli qembu laseNaturena usenesikhathi agcina ukubonakala.
Umqeqeshi, uGavin Hunt akafunanga ukuphumela obala uma ebuzwa ngoKhune, wavele wazincomela uDaniel Akpeyi ukuthi udlale kahle kakhulu emdlalweni wabo neStellenbosch FC.
Akushilo nje okukhomba ukuthi uKhune usekude ukubuya wukuthi athi umuntu ofuna ukuba seqenjini eliqala imidlalo kuMakhosi kumele azikhandle abonise ukuthi uyafuna ukudlala.
“Kuyancintiswana lapha, futhi abantu kumele basebenze ngokukhathala ukuze babuyele eqenjini,” usho kanje kwabe ukuphela kwangakusho ngoKhune.
UKhune wazidalela amazinyo abushelelezi kade sekunguyena unozinti osetshenziswayo ngesikhathi enza amaphutha afanayo kuze kube kabili kukandelana.
Lo nozinti oyisethenjwa nakuBafana Bafana wavele wenza isimanga bedlala neBlack Leopards evele ephasela u-Ovidy Karuru ibhola wavele walinamathisela enethini kalula. Nokho Amakhosi akwazi ukubuya ayibamba ngo 2-2 iLeopards kulowo mdlalo.
Kolandelayo, bedlala neSuperSport United, uKhune waphinda sona leso, waphasela uSipho Mbule ibhola, owabe eselidlulisela kuBradley Grobler walibeka enethini.
Kusukela lapho wabe esebekwa ebhentshini lo nozinti, kodwa muva nje akasekho kwalapho njengoba esephenduke isihlwele, indawo yakhe ebhentshini yathathwa nguBruce Bvuma.
Previous Previous post: ‘Sekuyakhanya phambili,’ kusho uZinnbauer wePirates
Next Next post: UKonqobe uwusizo olukhulu kwiChippa, kusho uMalesela